Hepatitis C အသည်းရောင် (စီ) ပိုး – Mawlamyine Daily
Hepatitis C အသည်းရောင် (စီ) ပိုး
၁။ ဆရာရှင့် Hepatitis C က တံတွေးကနေ ကူးနိုင်ပါသလားရှင့်
၂။ ဆရာ သမီး C ပိုးအကြောင်းမေးချင်လို့ပါဆရာ။ သမီးက C ပိုးရှိတဲ့မိခင်နဲ့ကလေးကို ပြုစုပေးနေရတာပါဆရာ။ C ပိုးက ချွေး၊ တံတွေးတွေးကနေ ကူးတယ်လို့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတော်တော်များများက ပြောကြပါတယ်ဆရာ။ တချို့ကလည်း C ပိုးလူနာကိုထိုးထားတဲ့ဆေးထိုးအပ်စူးတာတောင် မကူးဘူးလို့ပြောကြပါတယ်ဆရာ။ မိခင်က C ပိုးရှိတာတောင် ကလေးကိုမိခင်နို့တိုက်ရပါတယ်ဆရာ။ ကလေးကို မိခင်နို့ကတဆင့်မကူးနိုင်ဘူးလားဆရာ။ ပြီးတော့ C ပိုးရှိတဲ့လူနာရဲ့ ခင်ပွန်းကို သွေးစစ်ကြည့်တဲ့အခါ C ပိုးမတွေ့ရပါဘူးဆရာ။ သမီးက အမြဲတမ်း လူနာနဲ့ထိတွေ့နေရပါတယ်ဆရာ။ သွေးကိုတော့ မထိမိအောင် သေချာဂရုစိုက်ပါတယ်ဆရာ။ ချွေးတံတွေးကလည်း ကူးတက်တယ်ဆိုလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရမ်းစိုးရိမ်နေပါတယ်ဆရာ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကူးသွားပြီလားလို့လည်း စိတ္တဇဖြစ်နေပါတယ်ဆရာ။ ကျေးဇူးပြု၍ ရှင်းပြပေးပါဆရာ။ ကိုယ့်မှာ C ပိုး ကူးမကူးသိနိုင်အောင် ရက်ဘယ်လောက်ကြာရင် သွေးစစ်ရင် အဖြေသိရနိုင်မလဲဆရာ။
၃။ ဆရာ ကျွန်တော်ဟာ ဆရာ့ရဲ့ ဆေးပညာပေးတွေကို အမြဲဖတ်ပြီးနာယူတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ မထင်မှတ်ပဲ ကျွန်တော့် ဦးလေးတယောက် အူတက်ပေါက်လို့ ဆေးစစ်ကြည့်တော့ C ပိုးပါတွေ့တယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆရာ။ ကုသလို့ ရနိုင်သလား ရောဂါပျောက်နိုင်သလား နည်းပေးလမ်းညွှန်ပေးပါလားဆရာ။ နိုင်ငံခြားသွားကုရင်ကောင်းပါ့မလား။ ဒါမှမဟုတ် ရန်ကုန်တက်ပြီးကုရင်ရော ကောင်းမလားမသိဘူးဖြစ်နေတယ်ဆရာ။ အခုဆို ရန်ကုန်ဆေးရုံတွေက ဈေးတွေသာကြီးပြီး ဆေးတခြား အနာတခြားပဲတဲ့ ရန်ကုန်က မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်က ကိုယ်တွေ့ပြောပြပါတယ်။
၄။ (စီ) ပိုးရှိတဲ့သူနဲ့ အကာအကွယ်မဲ့ လိင်ဆက်ဆံရင် ကူးနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင့်။ တကယ်လို့ ကူးခဲ့ရင် အတူနေပြီး တစ်လအတွင်းစစ်ရင် ကူးလားမကူးလား သိနိုင်ပါသလားရှင့်။ HCV antibody ပေါ်နိုင်ပါသလားရှင့်။ Condom မပါပဲ အတူနေပြီး ဘယ်လောက်ကြာရင်၊ ရောဂါကူး/မကူး သေချာစစ်ဆေးသိနိုင်ပါမလဲရှင့်။
နောက်ဆုံးတွေ့ရှိချက်တွေအရ (စီ) ပိုးဟာသွေးလမ်းကတဆင့်ကူးတယ်။ ပိုးရှိသူနဲ့ အတူနေရင် ကွန်ဒွမ်သုံးရပါမယ်။
အသည်းရောင် (စီ) တွေ့ရင် ရောဂါလက္ခဏာမရှိဘဲနေတတ်လို့၊ အတော်များများက ဆေးစစ်တဲ့အခါ အမှတ်မထင် ပိုးရှိနေတာကို တွေ့ကြရတယ်။ (စီ) ပိုးတွေ့တယ်လို့ဆိုရင် သူဟာကမ္ဘာပေါ်ကလူပေါင်းသန်း ၁၇ဝ ထဲက တယောက်ပါ။ အကြောက်မကြီးအောင် ပြောရရင် ၁ဝဝ မှာ ၈ဝ-ဂ၅ ယောက်လောက်ကနာတာရှည် မဖြစ်ကြပါ။ နာတာရှည်ကနေ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးဝါးတာတွေဖြစ်တဲ့ ရာနှုန်းကလည်း ၅ ဂဏန်းအောက်မှာပါ။
သေခြာအောင်လုပ်ရမှာက သွေးစစ်ပါ။ ပိုးရှိ-မရှိ၊ ပိုးဘယ်လောက်များလဲ၊ Liver biopsy အသည်းရဲ့ အသားစထုတ်ယူ စစ်ဆေးတာက အသေခြာဆုံးပါ။ နောက် Hepatitis C antibody test နဲ့ PCR test အပြင် အသည်းအခြေအနေကို ဆန်းစစ်ဘို့ Liver function tests လုပ်ရတယ်။ တိကျအောင် Hepatitis C Genotype test ဆိုတဲ့ ပိုးအမျိုးအစား ခွဲတာလဲ လုပ်ရပြန်ပါသေးတယ်။ (စီ) ရှိနေရင် HIV ကိုပါ စစ်ပါ။ နှစ်ခုလုံးတွဲရှိသူတွေ ရှိတယ်။ HIV က ပိုဆိုးတာကကိုယ်ရဲ့ ခုခံအားစနစ်ကြီးကို ဖျက်ပြစ်လို့ပါ။ နဲနဲကောင်းတာက HIV ကိုကုဘို့ ဆေးတွေရှိနေပြီ။ နဲနဲလို့ ပြောရတာက ဆေးက သက်သာစေဘို့သာ ဖြစ်ပြီး၊ အပျောက်မရသေးလို့ပါ။
2. Cheap medicine for hepatitis C အသည်းရောင် (စီ) ဆေး ဈေးချိုချိုနဲ့ရနိုင်တော့မည် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/cheap-medicine-for-hepatitis-c.html
4. Effects of Hepatitis C on the Body အသည်းရောင် (စီ) ပိုးရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်သက်ရောက်မှုများ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/effects-of-hepatitis-c-on-body.html
11. Hepatitis C Treatment and Management အသည်းရောင် (စီ) ဘယ်လိုကုသလဲ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hepatitis-c-treatment-and-management.html
12. Hepatitis C Vaccine အသည်းရောင် (စီ) ကာကွယ်ဆေး အလားအလာရှိ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hepatitis-c-vaccine.html
16. Pregnancy and Hepatitis C အသည်းရောင် (စီ) နဲ့ ကိုယ်ဝန် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/pregnancy-and-hepatitis-c.html
18. Treatment of HCV Genotypes အသည်းရောင် (စီ) ဂျီနိုအမျိုးအစားအလိုက်ဆေးများ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/treatment-of-hcv-genotypes.html